Faafiye Latest news. Archives - Wargeyska Faafiye
Magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa ku geeriyooday Ahmed Kathrada oo ka mid ahaa shaqsiyaadkii u soo halgamay in dalka laga saaro xukunkii midab takoorka. Waxa uu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Nelson Mandela, kaasi oo…
March 28, 2017 · by	Liban Farah ·
WASHINGTON — Vowing he won’t turn Somalia into a “free fire zone,” the commander of U.S. Africa Command said Friday he wants greater authority to conduct airstrikes and use military forces in the African country to allow the U.S. to…
March 25, 2017 · by	Liban Farah ·
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR ayaa ku baaqday in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo duqeyntii loo geystay qaxooti Soomaali ah oo todobadkii aynu soo dhafnay dooni ay sarnayeen loogu geystay xeebaha dalka Yemen. Qaxootigaas ayaa la sheegay…
Xusni Mubaarak oo xabsiga laga sii daayay.
Madaxweynihii hore ee waddanka Masar, Maxamed Xusni Mubaarak ayaa maanta xabsiga laga sii daayay. Waxaa xabsigaasi la geliyay 2011 markii xukunka laga tuuray. Waxaa lagu hayay cisbitaal milateri oo ku yaalla caasimadda Qaahira. Go’aankan ayaa daba socda xukun ay horraantii…
sharciyeedkii caafimaadka Trump oo guuldarystay.
Madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, ayaa qeexay inuu la yaabay oo uu ka niyadjabay inuu burburay sharci la doonayay in lagu badelo adeega caafimaad ee Obamacare. Xisbigiisa Jamhuuriga ayaa dib ula laabtay hindise sharciyeed ka hor inta uusan u codeyn…
Puntland oo Ciidamo u Dirtay Markab la Afduubtay
Qaar ka mida kalluumaysatada xeebaha Puntland ayaa ka cabanaya maraakiib iyo doonyo shisheeye oo culays ku haya kalluumaysigooda. Muuse Cali Jaamac oo ah Guddoomiyaha shirkad kalluumaysi oo lagu magcaabo KAFCO ayaa sheegay in maraakiib iyo doonyo tiro badani ay…
March 15, 2017 · by	Liban Farah ·
Maamulka Australia ayaa ka digay halista ka dhalan karta in gudaha diyaaradaha lagu isticmaalo qalabka baytariyada ku shaqeeya, ka dib markii uu dab qabsaday haweenay qabtay sameecadaha dhagaha la gashado. Haweenayda oo laamadooda oo saaran diyaarad ka soo duushay magaalada…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta garroonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kula kulmay Xoghayaha Arimaha Dibadda ee dalka Ingiriiska Boris Johnson oo saaka soo gaaray gudaha dalka. Xoghayaha oo saaka socdaal aan horay loo sii…
Ugu yaraan 50 ruux ayaa ku dhintay qashin qub sida buuraha noqday oo dusha ka maray guryo ku yaala duleedka caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, sida ay saraakiishu sheegeen. Waxaa kale oo ay sheegeen in wali la la’yahay tiro dad…
March 14, 2017 · by	Liban Farah ·
Yurub: Maxkamadda ugu sarraysa oo tidhi shirkaduhu way diidi karaan in shaqaalahoogu xijaab xidhaan
Maxkamadda ugu sarraysa Yurub, ayaa xukuntay in dadka loo shaqeeyeyaasha ahi ay xor u yihiin in ay shaqaalahooda ka mamnuucaan “xidhashada wax kasta oo noqon kara calaamad siyaasadeed, mid falsafadeed ma mid diineed oo muuqata” waxaana ka mid ah xijaabka.…
Markab uu Imaaraadka Leeyahay oo Soomaaliya lagu afduubtey.
Markab ganacsi oo laga leeyahay dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa lagu afduubtey xeebaha Puntland, Soomaaliya, wararkuna waxa ay sheegayaan in lala aaday dhankaasi iyo Raas Caseyr. Ragga afduubka geystey ayaa ku joogay labo doonyood oo kuwa dheereeya ah, waxana…
Salaad Roob doon ah oo Maanta laga tukanaayo Muqdisho iyo Goboladda Dalka.
Salaad roob doon ah oo Alle looga baryaayo in uu abaaraha ka dulqaado Goboladda dalka Soomaaliya ayaa saakay laga oogay Magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah Gobolada Dalka. Salaadaan oo Alle looga tuugayo in uu dadka Soomaaliyeed ee Abaaraha…
My meeting with a forgotten terrorist in Somalia.
Story by Michelle Shephard. MOGADISHU, SOMALIA—A man who has been called everything from a terrorist, a visionary, a clan elder, a religious scholar, a killer and a statesmen greets me on his driveway with a wave and a grin. Sheikh…
March 11, 2017 · by	Liban Farah ·
Aabbe iyo gabdhihiisa oo isku jaamacad dhigta.
Jaamacadda ummadda oo ku taalla magaalada Muqdisho ayaa waxaa wada dhigta aabbo iyo afar gabdhood oo uu dhalay, kuwaasoo hal meel wax ka wada barta. Aabbahan oo lagu magacaabo Yuusuf Aybakar Shadoor ayaa dhawaan waxbarashada dib u bilaabay, ka dib…
Al-Shabaab oo “57 looga dilay” Afmadow.
War saxaafadeed ay soo saareen ciidamada Kenya ayay ku sheegeen in Al-shabaab ay 57 dagaalyahan kaga dileen weerar ay ku qaadeen saldhig kooxda ay ku leheed nawaaxiga Afmado. Ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay weerarka u adeegsadeen madaafiic iyo diyaarada,…
March 3, 2017 · by	Liban Farah ·
Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka oo “xiriir la leh” Ruushka.
Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions wuxuu laba goor la kulmay safiirka Ruushka, ka hor doorashadii Mareyknak ee Trump uu ku guuleystay, dowladda ayaa sidaas xaqiijisay. Mr Sessions, oo xilligaasi ahaa xubin ka mid ah aqalka sare, wuxuu sheegay,…
March 2, 2017 · by	Liban Farah ·
Jiir baajiyay duullimaad diyaaradeed.
Diyaarad u socotay Mareykanka ayaa duullimaad keeda la baajiyay ka dib markii gudaheeda lagu arkay jiir. Diyaaradda ayaa ka kici lahayd garoonka diyaarada London ee Heathrow. Rakaabka British Airways ayaa diyaaradda laga dejiyay ka dib markii arrinta lama filaanka ah…
Macallimiin laga afduubay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Wararka ka imaanaya xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa sheegaya in laba macallin oo aan Soomaali ahayn laga afduubtay. Macallimiintaas ayaa la afduubay xalay, sida ay sheegayaan goobjoogayaal. Waxaa laga kexeystay gurigooda oo ku yaalla xerada Xagardheer, Waxaana weerarka ka dambeeya…
Xasan Kheyre oo Baarlamanka u Ansaxshay Inuu Noqdo Ra’iisul Wasaare.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh kalsoonida ku siiyay Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo 23-kii February uu u magacaabay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo. Ra’iisul wasaaraha ayaa helay dhammaan codadka 231 xildhibaan oo fadhiyey…
March 1, 2017 · by	Liban Farah ·
Descending regally from his private plane in a customised gold-coloured escalator, Saudi Arabia’s King Salman bin Abdulaziz al Saudbegan the first visit in almost 50 years of a Saudi leader to the world’s most populous Muslim nation, Indonesia, on Wednesday.…
Abdi Warsame VS Sabri? iyo Mohamud Noor oo Mar AFARAAD Kursi RAADIS AH.
Waxaa sanadkan dhici doonta Doorasho lagu dooranayo golaha magaalada Minneapolis iyo Duqa Magaaladan. Doorashadan ayaa dhacda afartii sano ba mar . Doorashadan ayaa waxaa u tartamaya Jagada Golaha Magaaladan Minneapolis dad aad u fara badan oo ay qaarkood yihiin Somali…
February 28, 2017 · by	Liban Farah ·
Roobabkii Muqdisho iyo saamayntooda.
Mushkilad soo wajahday odayaashii ansixiyay
100 ayaa la sheegay in lagu dilay Masar.
Dagaal Dhex Maray Galmudug iyo Al-Shabaab.